Nagarik Shukrabar - यौनकर्मीको सदाबहार स्पट
शनिबार, २४ साउन २०७७, ०९ : २७
शुक्रबार, ०७ पुष २०७४, १२ : २४ | शुक्रवार
मोडलिङमा आधारित तस्बिर । मोडल: स्यारोन राई/संजिब श्रेष्ठ । तस्बिर : रुकेश श्रेष्ठ
यता जनसेवा वृत्तका डिएसपी थापा फूटपाथ व्यापार, ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र कमजोर कानुनका कारण यो धन्दा रोक्न नसकिएको बताउँछन् । कसरी ? ‘दिनभर फुटपाथमा व्यापार गर्ने र साँझ परेपछि यौनधन्दा गर्ने केस पनि फेला पारेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तै फुटपाथ र शौचालय संचालन गर्नेको सेक्स वर्करको कनेक्सन हुने र कमिसनमा काम गर्ने गरेको पनि पाएका छौं । त्यसैले फुटपाथ व्यवसायलाई व्यस्थित गर्नुपर्छ । दोस्रो, धेरै नक्कली तेस्रोलिङ्गीको अहिले बिगबिगी छ तर ब्लु डायमन्ड संगठनका साथीहरु तेस्रोलिङ्गी यौनकर्मी समाउनासाथ छुटाउन आइपुगिहाल्नुहुन्छ । यसले पनि गाह्रो पारेको छ । तेस्रो, कमजोर कानुनका कारण यौनव्यवसाय रोक्न नसकिएको त देशकै समस्या भइहाल्यो ।’ यता तेस्रोलिङ्गीको पक्षमा काम गर्ने संस्था ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले आफूहरुले यौन पेसा अंगालेर बसेका तेस्रोलिङ्गीलाई यौन कार्य गर्न वा नगर्न केही सल्लाह नदिने बताइन् । ‘यौन पेसा गर्न वा नगर्न हामी कुनै सल्लाह दिँदैनौँ, त्यो उनीहरुको बाध्यता र स्वतन्त्रताको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘तर प्रहरीले भनेजस्तो तेस्रोलिङ्गीका नाममा अरु केटाहरु केटीको भेष बदलेर हिँड्दैनन् । हामी त केही निर्दोषलाई समाएर दुःख दिएको खण्डमा छुटाउन जाने हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।’ उनले त उल्टै प्रहरीमाथि आरोप लगाइन्, ‘बरु हाम्रै केही साथीहरुलाई कुनै—कुनै प्रहरीले समाएर हजार—पाँचसय लिँदै छाड्ने गरेको साथीहरुबाट सुनेका छौँ । यति भन्दाभन्दै पनि म के भन्छु भने कोही साँच्चिकै दोषी देखियो भने कार्बाही गर्नुपर्छ । यौन कार्यमा संलग्न हुने तेस्रोलिङ्गीले पनि अरु मानिसलाई अप्ठेरो पार्ने कार्य गर्न हुँदैन ।’ महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका अनुसार २०७४/७५ मा ६ जना महिला र ५ जना तेस्रोलिङ्गीलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक मुद्दा चलाइएको थियो । यता महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका डिएसपी तिलक भारतले केही महिनायता ८/१० जना तेस्रोलिङ्गी यौनकर्मीलाई कार्बाही गरेको बताए । ‘अहिले वेश्यावृत्ति अलि कम भएको छ,’ उनको दाबी थियो । तेस्रोलिङ्गीलाई थुन्नका लागि आफ्नो कार्यालयमा महिला कक्ष खाली नभए सोह्रखुट्टेको लैनचौर वृत्तमा लगेर थुन्ने गरेको उनले सुनाए ।
उस्तै व्यापार शैली
यौनकर्मीका मामिलामा मात्रै होइन, व्यापारका मामिलामा पनि रत्नपार्कको चरित्र बदलिएको छैन । रिपोर्टिङका क्रममा रत्नपार्क क्षेत्र पुग्दा त्यहाँ दिउँसो फुटपाथमा हात हेराउने ज्योतिषले ग्राहकलाई डर देखाउँदै भविष्यवाणी हेरेको र पत्थर भिराउने गरेको देखिन्थ्यो । साँझ परेपछि रत्नपार्कमा चहलपहल बढ्ने गर्छ । पार्कछेउ फुटपाथमा मासु, भुटनका परिकार बिक्री भइरहेको थियो । थरीथरी सामान फुटपाथमा फिँजाएर बेच्ने शैलीमा पनि कुनै फेरबदल थिएन । व्यापारको शैली पनि अब त ‘सदाबहार’ नै भइसक्यो । जहिल्यै पुगे पनि व्यापारीको ग्राहक तान्ने शैली उस्तै हुन्छ । सोमबार साँझ पुग्दा पनि उस्तै थियो ः
‘हजार १२ सयको जुत्ता मात्र ५ सय ५० मा ।’
‘हान्दियो, हान्दियो, १ सय ९० मा झोला । ’
‘आउनुस् है, बसौँ, भुटन खाएर जाऊँ ।’
‘कन्डम है कन्डम, लङ टाइम, काँडा वाला, ओइली सबैखाले छ ।’
‘रत्नपार्कको विकृति चाँडै अन्त्य गर्छौ’
अध्यक्ष, वडा नं. २८, काठमाडौं महानगरपालिका
तपाईंको वडामा पर्ने रत्नपार्क क्षेत्रलाई तपाईं कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ ?
यो क्षेत्रलाई एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, यो एकदमै महत्वपूर्ण र राजधानीको केन्द«विन्दु हो । यहाँ कतिपय कुरा राम्रा पनि छन्, कतिपय नराम्रा पनि । राम्रा कुरालाई प्रोत्साहित र नराम्रालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल मन्त्र हो ।
यो क्षेत्र यौन क्रियाकलाप हुने क्षेत्रकोे रुपमा बढी चर्चित छ, यसको परिचय सधैंँ यस्तै हुने हो ?
होइन, यो हटाउनको निमित्त मैले महानगरको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छु । हामीले यो हटाएरै छाड्छौँ । महानगर प्रहरी लगाएरै भए पनि यो विकृतिको अन्त्य गर्छाैं ।
आसपासका होटलले पनि यौन व्यवसायलाई सघाउ पुर्याएको पाइयो नि ?
हो । हामीले सामुदायिक प्रहरी लगाएर छापा मारेका छौँ । अनि त्यस्ता व्यवसायीलाई पक्रेर प्रहरीलाई पनि बुझाएका छौँ तर विडम्बना प्रहरीले पनि २÷३ दिनमा छोडिदिने गरेको छ ।
चारैतिर पुलिस र नजिकै महानगर कार्यालय भएर पनि यो क्षेत्र असुरक्षित भयो भन्ने आरोप छ नि ?
यस्तो असुरक्षा र विकृतीको अन्त्यको लागी प्रहरी, प्रशासन र महानगर मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । अब हामी यहीअनुरुप अगाडि बढ्छौँ र असुरक्षित, विकृत रत्नपार्क क्षेत्रको परिचय बदल्दै सुरक्षित र सभ्य क्षेत्र भनेर चिनाउछौँ ।
तपाईं निर्वाचित भएर आएको ५ महिना बढी भइसक्यो, तैपनि केही गर्न सक्नुभएन है ?
हेर्नुस्, यो ठाउँबारे म पहिलेदेखि नै परचित छु । काम गर्न एक जनाले मात्रै चाहेर हुँदैन रहेछ । कर्मचारीले काममा बाधा गरेको महसुस गरेको छु । जनप्रतिनिधिको हातमा केही पनि छैन । हामी मिसनसहित यो, यो गर्ने भनेर आएका छौँ तर प्रशासनिक झमेलाले गर्दा केही महत्वपूर्ण काम गर्न सकेका छैनौँ, चाँडै झमेलालाई चिरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।